Mandeha Ny Fandrotsahambato Hifidianana Ny Ho Filoha Eto Madagasikara · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Desambra 2013 8:49 GMT
Fanangonam-bato tao amin'ny biraom-pifidianana iray via Andrimaso ary nahazoana alalana
Nandeha tany amin'ny biraom-pifidianana i Madagasikara androany [zoma] hanapa-kevitra amin'izay tiany ho filoha. Ny fizotry ny fihodinana voalohany moa dia nampifanatrika ankolaka ny filoha teo aloha lasa an-tsesintany, Marc Ravalomanana, sy i Andry Rajoelina, izay nanongana an-dRavalomanana tamin'ny alalan'ny fanampian'ny miaramila tamin'ny 2009. Nanolotra tsara ny fehin'ny toe-draharaha moa i Brian Klaas ao amin'ny Bilaogy DemocracyinAfrica :
Amin'ity zoma ity, mitodi-doha ho any amin'ny biraom-pifidianana i Madagasikara hifidy filoha sy parlemanta vaovao. Ny fifidianana no dingana lehibe voalohany hialana amin'ny ‘tetezamihitatra’ nanomboka tamin'ny 2009 rehefa nanongana an'i Marc Ravalomanana, mpanakarembe lasa filoha, tamin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana ara-miaramila i Andry Rajoelina, DJ radio lasa ben'ny tanàna.
Mahazo vahana eo amin'ny politika malagasy ireo olona roa ireo, saingy tsy nisy nirotsaka ho filoha – na farafaharatsiny tsy mivantana. Fa nanoloetra olona akaiky ho kandidà ry zareo araka ny fifanarahana iraisampirenena nifanaovana hamaranana ny kizo. Ny dokotera Jean-Louis Robinson, minisitry ny fahasalaman-dRavalomanana teo aloha sady manana toerana lehibe ao amin'ny OMS, no mijoro eo amin'ny toeran'ny lehibeny teo aloha. Hery Rajaonarimampianina, Minisitry ny vola sy ny tetibola tao amin'ny fitondrana nanaraka ny fanonganam-panjakana, izay misolo toerana ny Filohan'ny Tetezamita, Rajoelina.
NIjery ny andiana adi-hevitra intelo miantoana nifanaovan'ny kandidà mirahalahy tamin'ny fahitalavitra ny mpifidy malagasy. Tsy dia nampientanentana loatra ny voalohany, araka ny notaterin'ny lahatsoratry ny Madagascar Tribune, satria samy nitandrina loatra sy tsy manan-kevi-baovao ny roa tonta:
Tsy maintsy mba manontany ihany isika raha tena resy lahatra amin'ny heviny hamaha ny olantsika tokoa ny kandidà na mionona amin'ny valinteny moravidy tian'ny fiarahamonina iraisampirenena sy ny mpanohana ara-bola ho henoina fotsiny. (Raha ny marina, ny adihevitry ny kandidà filohampirenena dia mety ho fanomezana hafatra mahery hahazoana fiaraha-miasa, na mpanohana ara-bola ihany koa). Matetika misy fotoana tahaka ny manao tsianjery fandaharan'asa avy any amin'ny talatalan-kevitra any ny kandidà—tsy mety ny mampiasa “tambavy” antitra ampidirina any anaty tavoahangy vaovao indray dia avy eo miteny hoe “hafa indray ity.” Ho an'ny olom-pirenena roapolo tapitrisa miampy vitsivitsy hafa, tokony ho tena hafa tokoa ny amin'ity indray mitoraka ity. Andao hihaika ny kandida isika hivoaka amin'ny lala-masaka ary hampiseho amin'ny mpifidy fa tsy mitovy koa ry zareo!
Natao tamin'ny teny frantsay ny fiadian-kevitra faharoa, ary niompana tamin'ny raharaha iraisampirenena. Somary nasiaka kokoa ny kandidà andritra ny adihevitra fahatelo. Mbola banga hatrany anefa ny famoahana hevitra na izany aza, satria ny ankamaroan'ny famelezana dia mamely olona manokana, tahaka izay nitranga nandritra ny fanaovana fampielezan-kevitra manontolo, izay nifantoka tamin'ny fihetsiketsehana sy fandihizana an-dalambe ny raharaha fa tsy tamin'ny alalan'ny fampiadiana hevitra. Ary izany indray no notaterin'i Brian Klaas :
tsy nisy fivoarany tamin'ny fifaninanana fanaovana fampisehoana loatra ny fampielezan-kevitra. Ny politika malagasy tsy mifototra amin'ny fandrafetana politika, ary vitsy ny hilaza fa ny fifidianan-dry zareo dia izay mety ho zavatra rehetra ankoatra ny fanohanan'olo-malaza sy ny mahaizy ilay olona. Mampihomehy ny teti-panorina politika amin'izao fotoana izao miankina amin'ny balaonina, fandihizana ary ny mozika mitabataba, saingy mety hiteraka voina ilay fampihomehezana rehefa tsy miezaka ny miala amin'ny fahantrana mahakivy amin'ny alalan'ny demokrasia sy ny fanohizana ny fampandrosoana i Madagasikara.
Mitohy ny fampisehoana rehefa misy ny fiarahan'ny mpanao politika noheverin'ny rehetra ho mpifahavalo no niara-dia tampoka tamin'ny kandidà iray na ny hafa – sy ny fihariharian'i Andry Rajoelina, noheverina ho tsy mitongilana, nivoaka nanohana ny minisitry ny tetibolany teo aloha, Hery Rajaonarimampianina :
Fihodinana faharoa, kandidà ofisialin'ny filoham-pirenena 2018… Tafatafa tamin'i Andry Rajoelina
Nandritra ny fandrotsaham-bato, nisy ny tsy fanarahan-dalàna notaterina tao amin'ny Twitter.
ny vondrona misy ny kandidà Dr Jean Louis Robinson miampanga ny ekipa mifanohitra aminy ho manome vola hifidianana azy any biraom-pifidianana. Nifanena taminay.
Andao antenaina hitondra fandriampahalemana sy fiovana ho an'i Madagasikara ny taona vaovao 2014, fa mbola miandry hatramin'ny Janoary ny olom-pirenena vao hahita ny vokatry ny fihodinana faharoa.
Mpifidy 7,6 tapitrisa; biraom-pifidianana 20.115; vokatra hivoaka amin'ny Janoary